ESI EME IHE OYIYI FOTO NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Esi eme ihe oyiyi foto na Photoshop
Ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ha na-eji kọmputa ma ọ bụ mgbe ha na-ege egwu na ọ na-eji ekweisi. Ma ọ bụghị onye ọ bụla maara otú e si hazie ha n'ụzọ ziri ezi. Ka anyị chọpụta otú ị ga - esi mee ka ihe dị mma nke ngwaọrụ a dị na PC na - agba Windows 7.
Hụkwa: Otu esi edozi ụda na kọmputa na Windows 7
Mgbe ịmechara usoro maka ijikọ isiisi na kọmputa ka ha wee mụta ụda dị elu, ọ dị mkpa na ị na-agbanye ngwá ọrụ a. Enwere ike ime nke a site n'usoro ihe omume maka ịchịkwa kaadị ekwenti, ma ọ bụ site na iji naanị ngwaọrụ nke Windows 7. Anyị ga-achọpụta otú ị ga-esi gụgharịa isi okwu ekwentị na PC site na iji usoro ndị a gosipụtara.
Ihe omumu: Otu esi ejikọ ekweisi ekwenti na komputa
Usoro 1: Nchịkọta Kaadị Kaadị
Nke mbụ, ka anyị chee otú ị ga-esi tinye isi ekwe ntị site na iji njikwa kaadị ozi. K'anyị kọwaa algorithm nke omume na-eji ihe atụ nke usoro ihe omume maka VIA HD nkwụnye.
Pịa "Malite" ma kwaga "Ogwe njikwa".
Gaa na ihe ahụ "Akụrụngwa na ụda".
Meghee "VIA HD".
The VIA HD Audio Card Manager amalite. Nzọụkwụ nhazi ọ bụla ga-eme n'ime ya. Ma mgbe mbụ ị na-atụgharị ị gaghị ahụ ekweisi ọ bụla na interface nke software a, ọ bụrụgodị na ejikọ ha na eziokwu, ma ọ bụ naanị ndị ọkà okwu. Iji rụọ ọrụ ngosipụta nke ihe akụrụngwa achọrọ, pịa ihe ahụ "Nhọrọ Di elu".
Na-esote, gbanwee mgbanwe ahụ "Ebugharị isi igwe" na ọnọdụ "Igweisi Igwe Onwe Onye" wee pịa "OK".
Usoro ahụ ga-emelite ngwaọrụ ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị na VIA HD interface na ngọngọ ahụ "Ngwaọrụ Playback" Igweisi isi igwe gosipụtara.
Pịa bọtịnụ ahụ "Ọnọdụ di elu".
Gaa na ngalaba "Earphone"ma ọ bụrụ na windo meghere na ọzọ.
Na ngalaba "Njikwa ụda" A na-agbanwe olu isi okwu. A na-eme nke a site n'ịdọrọ ihe mmịfe ahụ. Anyị na-akwado ịdọrọ ya na nri na oke. Nke a ga - apụta ụda nke kachasị ụda. Mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume ịhazigharị ọkwa dị elu site na mmemme mmeghachi omume: ọkpọ mgbasa ozi, ozi ngwa ngwa, wdg.
Ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịgbanwe olu nke isi ọ bụla n'otu n'otu. Iji mee nke a, pịa ihe ahụ "Mmekọrịta ụda nri na aka ekpe".
Ugbu a, site na ịdọrọ aka nri na aka ekpe nke dị n'elu ihe a, ị nwere ike ịgbanwe olu nke isi okwu ahụ.
Gaa na ngalaba "Dynamics and test parameters". N'ebe a, nchịkọta olu na-amalite ma ụda isi nke isi ọ bụla na-anwale n'otu n'otu. Iji mee nke a, rụọ ọrụ bọtịnụ ahụ ozugbo, wee pịa na mmewere "Nwale okwu niile". Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-akpọ ụda ahụ na mbụ na otu earpiece na mgbe nke abụọ. Ya mere, ị nwere ike iji tụnyere nyocha nke ụda nke ọ bụla n'ime ha.
Na taabụ "Ụdị Kwadoro" O kwere omume ịkọwa ọkwa nke ugboro nlele na ọnụọgụ mkpebi ntinye site na ịpị bọtịnụ kwekọrọ. Ekwesiri icheta na elu nke ị setịpụrụ ndị na-egosi, mma ka ụda ahụ kwesiri ịbụ, ma a na-eji ihe nchịkọta ihe eji egwu ya. Ya mere, gbalịa nhọrọ dị iche. Ọ bụrụ na, mgbe ị na-ahọrọ ọkwa dị elu, ị gaghị ahụ ọkwa dị elu na mma ụda, nke a pụtara na ekweisi gị enweghị ike ịnye ya na njirimara ha. N'okwu a, ọ na-eme ka uche ghara ịtọ ntọala dị oke elu - ọ ga-ekwe omume iji jidekwa ndị nke kachasị mma nke mmepụta ahụ kacha mma.
Mgbe ịgbanye na tab "Ejikọta" E nwere ohere iji dozie tim tim ụda. Mana maka nke a, buru ụzọ pịa ihe ahụ "Kwado". Ndị na-eji akara ụda olu ga-arụ ọrụ, ị nwere ike ịtọ ha na ọkwa ndị ahụ a chọrọ ịrụ ọrụ dị mma. Mgbe arụ ọrụ ntanetị dị mma, a ga-agbanwe ọnọdụ niile sliders site na-akpụgharị naanị otu n'ime ha. Ndị ọzọ ga-agafe na-adabere na ọnọdụ mbụ ha nwere n'ebe ibe ha nọ.
Ị nwekwara ike ịhọrọ otu n'ime atụmatụ asaa ahụ edepụtara site na listi "Ntọala Ntọala" dabere na ụdị egwu egwu egwu. N'okwu a, ndị nkedo ga-agbado dịka nhọrọ ahọrọ.
Na taabụ Audio dị jụụ Ị nwere ike ịhazigharị ụda na ekweisi dịka ndabere nke ụda. Ma, nyere njirimara nke ngwaọrụ ahụ anyị kọwara, karịsịa, ọ ga-adaba na oghere ntị, n'ọtụtụ ọnọdụ, iji ọrụ a arụ ọrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịmegharị ya site na ịpị mmemme ahụ "Kwado". Na-esote ndepụta ndepụta "Nhọrọ di elu" ma ọ bụ site na ịpị akara ngosi kwesịrị ekwesị dị n'okpuru, họrọ ebe kwesịrị ekwesị. Ụda ahụ ga-agbanwe agbanwe na nhọrọ nhọrọ.
Na taabụ "Ndozi ụlọ" naanị ihe dị mkpa bụ ịchọpụta mmewere "Kwado" ejighi arụ ọrụ. Nke a bụ n'ihi otu ihe ahụ dị ka ntọala nke ọrụ gara aga: ogologo dị n'etiti onye ọrụ na isi iyi dị na ya bụ ihe efu, nke pụtara na ọ dịghị mkpa a chọrọ.
Usoro 2: Ngwaọrụ System
Ịnwekwara ike ịhazi isiisi site na iji ngwaọrụ ndị a wuru ewu nke sistemụ. Ma nhọrọ a ka na-enye obere ohere karịa nke gara aga.
Gaa na ngalaba "Ogwe njikwa" n'okpuru aha "Akụrụngwa na ụda" wee pịa "Ụda".
Site na aha ngwaọrụ ndị ejikọrọ, chọta aha nke ekweisi a chọrọ. Biko rịba ama na n'okpuru aha ha bụ akwụkwọ edemede "Ngwaọrụ Nhọrọ". Ọ bụrụ na ịchọta aha ọ bụla ọzọ, pịa aka nri ma họrọ "Jiri na ndabara".
Mgbe ederede ederede a chọrọ n'okpuru aha, họrọ ihe a ma pịa "Njirimara".
Gaa na ngalaba "Ọkwa".
Debe olu nke ụda ahụ ka kachasị. Iji mee nke a, dọrọ ihe mmịfe ahụ n'ụzọ niile gaa n'aka nri. N'adịghị ka VIA HD Audio Deck, ị gaghị enwe ike ịhazi ọkpụkpọ ọ bụla iche iche site na iji ngwaọrụ arụmọrụ, nke ahụ bụ, ha ga-enwe ihe niile yiri nke ahụ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ime ntọala nhazi, gaa na ngalaba "Ndozi" (ma "Mmezi"). Lelee igbe nlele ahụ "Kwado ụda ...". Wee pịa "Ntọala ndị ọzọ".
Site na ịmegharị ndị nkedo na ọkwa dị iche iche, dozie timeta nke kachasị anya na ihe ndị ị na-ege ntị na-eji otu algorithm dịka e dere mgbe ị na-eji VIA HD. Mgbe i mechara nhazi ahụ, mechie window windo. A ga-echekwa mgbanwe na njedebe ndị a.
N'ebe a, dịka na VIA HD, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ otu n'ime nhọrọ nhọrọ mpaghara site na listi ọdịda. "Ntọala"nke ahụ ga-eme ka ihe ngwọta nke ọrụ ahụ kwadoro maka ndị na-amaghị nke ọma na ụda olu.
Ihe Ọmụmụ: Ịhazi nhazi na kọmputa na Windows 7
Mgbe ahụ, laghachi na windo isi nke isi okwu isi na ịnyagharịa na ngalaba "Di elu".
Gbasaa ndepụta ndetu "Ụdị Kwadoro". N'ebe a, ị nwere ike ịhọrọ ọnụọgụ kachasị mma na ọnụ ọgụgụ dị nro. Mgbe ị na-ahọrọ nhọrọ, malite na nkwenye ndị ahụ maka VIA HD: ọ na-eme ka uche ghara ịhọrọ ọnye akụnụba ma ọ bụrụ na ekweisi gị enweghị ike ịrụ ọrụ na elu elu. Iji gee ntipụta, pịa "Nkwenye".
Anyị na-enye ndụmọdụ ka ị wepụ ihe nlele niile site na igbe dị na ngọngọ ahụ "Okirikiri mode", nke mere na mgbe ị na-agba ọtụtụ ihe omume na-arụ ọrụ na ụda, ịnwere ike ịnweta ụda olu site na ngwa niile.
Mgbe emechara ntọala niile na window windo ndị ahụ, pịa "Tinye" ma "OK".
Ịnwere ike ịhazi ntọala isi okwu, ma na-eji njikwa kalịnda nke ọma na ọrụ dị n'ime Windows 7. Ekwesịrị iburu n'uche na nhọrọ mbụ nyere ohere ndị ọzọ iji dozie ụda karịa nke abụọ.
Nchọpụta nsogbu njehie akaụntụ Google na gam akporo
Ihe nzuzo na aghụghọ nke Odnoklassniki
Ilele kaadị vidiyo maka arụmọrụ, nyocha ule.
Mee ngwa ngwa PC gị na Care Care 365
BreezeTree Software FlowBreeze 4.0
Ihe ọ bụla na-achọ ezigbo ndị ọkwọ ụgbọala, ọkacha mma nke kachasị ọhụrụ, maka mmekọrịta kwesịrị ekwesị na sistemụ arụmọrụ. Nke a na-emetụta ngwa ngwaọrụ. Ka anyị lelee usoro ịchọta na ịwụnye faịlụ maka ngwaọrụ na ihe atụ nke Nwanna DCP-7057R. GụKwuo
Ịmepụta usoro na Microsoft Excel
Uninstall mmemme na Windows 8
https://termotools.com ig.termotools.com © Photoshop 2019